iOS နဲ့ Android ဖုန်းတွေမှာ ကစားနိုင်မယ့် Top Ten ဂိမ်း ၁၀ မျိုး - PX
Mobile Game တွေ ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ထဲကမှ Top Ten စာရင်းဝင်ပြီး Free Download ရယူနိုင်မယ့် Action ၊ Adventure ၊ Arcade စတဲ့ ဂိမ်းတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Series : Alto, Engine : Unity, Developers : Team Alto ၊ Snowman
Publishers : Snowman ၊ Noodlecake Studio
Awards : Nominated for BAFTFA Games Award for Mobile
Release Date : 22nd Feb, 2018
Metacritic : 88 ၊ User Score : 7.8
Odyssey ကတော့ အရင်ထွက်ပြီးသား Alto’s Adventure ရဲ့ အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားရမယ့်ပုံစံက ရိုးရှင်းစွာနဲ့ပဲ Landscape ပုံစံဘေးတိုက်သွား ဆော့ကစားရမှာပါ။
Odyssey မှာ လှပတဲ့ Graphics ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး နှင်းတော ၊ Dunes & Desserts အခန်းတွေ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mission အလိုက်ကစားရင်း Coins တွေလိုက်စုရမယ်၊ Adventure ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ မုန်တိုင်းကျတတ်ပြီး မခက်တခက် ကစားရပါမယ်။
image Credit: Google Play Store/App Store
နောက်ပြီး Challenge Mission တွေပါဝင်သေးလို့ Infinite Runner ၊ Zen Gameplay စတာတွေ Unlock လုပ်နိုင်ဦးမယ်။ Freeware ဆိုတော့ Ads တွေ မကြာခဏ ပေါ်လာတာကိုတော့ သည်းခံရမှာပါ။
Download Links : iOS၊ Google
Developers : PUBG Corporations ၊ Lightspeed & Quantum
Publishers : Tencent Games ၊ VNG Game Publishing
Release Date : 9th Feb, 2018
Metacritic : 82 ၊ User Score : Mixed
Tencent ကျေးဇူးကြောင့် စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်ရောက်လာတဲ့ PUBG ကို ထွေထွေထူးထူး ပြောစရမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ 8×8 ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းတဲ့ စစ်မြေပြင်ထဲမှာ ရန်သူ ၉၉ ယောက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်။
မိုဘိုင်းဆိုတော့ Ammo နဲ့ လက်နက် Gear တွေ Auto-pick Up လုပ်ပေးထားပြီး Touch စနစ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် Game-control နဲ့ ဖန်တီးထားတာမလို့ ပစ်ရ၊ ခတ်ရ အရသာရှိတယ်။
နောက်ပြီး မကြာခဏ Update လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့ Game Mode အသစ်တွေ၊ Clan နဲ့ Quick Team Mode တွေပါဝင်လာပြီး Download ဆွဲကစားသူတွေ သန်း ၁၀၀ ကျော်သွား ပါပြီ။
Series : Asphalt, Developer : Gameloft Barcelona
Awards : Apple Design Award 2019 ၊ “Sports Game” at 2019 Webby Awards
Gameloft ကနေ ဖန်တီးရေးဆွဲထားတဲ့ Asphalt Racing Game ကိုတော့ မိုဘိုင်းရော PC ဂိမ်မာတွေပါ နှစ်ခြိုက်ကျပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လှပတဲ့ Graphics နဲ့ အလန်းစား Exotic ၊ Sports ၊ Luxury ကားမျိုးစုံပါဝင်လို့ မိုဘိုင်း Class မှာ အအောင်မြင်ဆုံးလို့ ပြောရင်မမှားပါဘူး။
Asphalt9Legends မှာဆိုရင် Ferrari ၊ Porsche ၊ Lamborghini တို့ရဲ့ Hypercar အသစ်တွေပါဝင်တယ်။ ကားတွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက် Customization လုပ်နိုင်ပြီး ကြိုက်တဲ့ Paint Jobs ၊ Materials တွေနဲ့ Upgrade လုပ်ပြီး Player ချင်းဖြစ်စေ Career Mode နဲ့ ဖြစ်စေကစားနိုင်မယ်။
အဲ့အတွက် Season အခု 60 နဲ့ Event ပေါင်း 800 ကျော်ပေါင်းထည့်ပေးထားပြီး ပျော်စရာ Nitro Pulse Speed Boost နဲ့ ကစားနိုင်ပါဦးမယ်။
Developer : Jam City HQ
Publisher : Jam City HQ
Awards : Best Fantasy Mobile Games at 2018 Dragon Awards
Metacritic : 43 ၊ IGN Score : 3.5
မူရင်းဇာတ်လမ်းနဲ့ ကွဲထွက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် Hogwarts ကျောင်းတော်ထဲမှာ အချိန်အတော်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာရမယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
RPG ဆန်ဆန် နှစ်သက်ရာ Avatar ရွေးပြီး Spells တွေသင်ယူရမယ်၊ ပြိုင်ပွဲတွေလည်း ယှဉ်ပြိုင်ရဦးမယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Harry Potter ဇာတ်လမ်းကို Adventure နဲ့ မှော်၂ မျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရပါမယ်။
တစ်ခုရှိမှာက In-game Purchase ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ဂိမ်းအတွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် Item တွေဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
Designers : Rus Yusupov ၊ Colin Kroll
Publisher : Intermediate Labs
Awards : Best Word and Trivia Game (2018 Webby Awards) ၊ Digital/Mobile Games (2018 Clio Sports) ၊ Partnerships, Sponsorships & Collaborations (2018 Clio Sports)
Release Date : 26 Aug (iOS), 31 Dec (Android) 2017
HQ Trivia ကတော့ လူကြိုက်များပြီး ရေပန်းစားနေတဲ့ Quest ပုံစံမျိုး အမေး၊ အဖြေ လုပ်ပေးရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ မေးခွန်း ၁ ခုချင်းစီဖြေဆိုနိုင်ပြီး Question 10 ခုလုံး မှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ချီးမြှင့်ငွေအမှန်တကယ် ရရှိမှာပါ။
Image Credit: SteemHunt
ဒါကြောင့် လူတိုင်းမပါဝင်နိုင်သလို ဂိမ်းကိုလည်း သူ့အချိန်နဲ့သူ သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ နေ့စဉ် 9PM ET (မနက် ၈ နာရီခွဲအချိန်)နဲ့ ရုံးပိတ်ရက်မှာဆိုရင် 3PM ET (မနက် ၂ နာရီခွဲ) ကစားချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး အကယ်၍ မေးခွန်းအားလုံးမှန်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ရင် PayPal ကတဆင့် ငွေပို့ပေးပါတယ်။
Series : Shadowgun, Engine : Unity, Developer : Madfinger Games
Publishers : Madfinger Games
Awards : Most Beautiful Game at Google Play 2019
Mobile Shooter Game ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ Shadowgun Legends ကို ကစားချင်မှာ အမှန်ပါ။ နာမည်ကျော် Destiny နဲ့ The Division ဂိမ်းပုံစံ ဆေ့ာ့ကစားရမယ့် ဒီဂိမ်းလေးထဲမှာ Mission မျိုးစုံပါဝင်မယ်။
အဖွဲ့လိုက် Boss နဲ့ သွား Fight ရတာမျိုး၊ လက်နက်နဲ့ Armor တွေ စိတ်ကြိုက် Customization လုပ်ပြီး Player Vs. Player ကစားနိုင်ဦးမယ်။ အခုလို Sci-fi အမျိုးစား Shooting ဂိမ်းကို ဆော့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Download ဆွဲ မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Series : NBA, Developers : Electronic Arts
EA ကနေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတဲ့ NBA Sports ဂိမ်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ Mobile Version Basketball Game မှာဆိုရင် Player Vs. Player ဆော့ကစားနိုင်မယ် အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲ ဖလားလုမလား၊ Season လိုက်ကစားဦးမလား မကျေနပ်သေးရင်း ၂ ယောက်သား စိန်ခေါပြီး Head-to-head ဆွဲနိုင်မယ့် Gameplay Mode တွေထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီဂီမ်းလေးက Free to Play ဆိုပေမယ့်လို့ In-game Purchase တွေပါဝင်ပြီး Boost ၊ Pack စတာတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Metacritic : 83 ၊ Google Play/iOS : 4.5
Gameloft ကနေပဲ တဖန်ပြန်ရေးဆွဲထားတဲ့ NOVA Legacy ဂိမ်းသစ်ကို Rework ၊ Free-to-play ဂိမ်းအဖြစ် ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအရ NOVA Corp. တပ်သား Kal Wardin နေရာကနေ Single Player Storyline အဖြစ် ဝင်ဆွဲရမှာပါ။
Armor Suit ကြီးဝတ်ပြီး AI Assistant Yelena နဲ့အတူ Alien တွေ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကို နှိမ်နှင်းဆော့ကစားရမယ့် ဂိမ်းကောင်းလေးပါ။ Multiplayer အနေနဲ့6Player Deathmatch ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link တွေမှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Google Play : 4.5 ၊ iOS : 4.7
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားလုံးတွေဆက်ပြီး ဉာဏ်စမ်းချင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်ချင်ပါသလား၊ ဒီ Words with Friends2မှာ Add-on တွေ ပါဝင်လာခဲ့ပြီး Solo Challenge ဒါမှမဟုတ် Team-based Lighting Round နဲ့ အဖွဲ့လိုက်ဆွဲချင်ပါသေးလား?
ရပါတယ် စကားလုံးအသစ်ပေါင်း 50,000 ကျော် ထပ်ထည့်ပေးထားပြီး ပထမဂိမ်းမှာ နိုင်ထားတာအားလုံး နောက်တစ်ဂိမ်းအထိ သယ်သွားနိုင်ပြီး Win Streak များလေ အမှတ်ပိုများလေဖြစ်မှာပါ။
Image Credit: Blue Stacks
ဂိမ်းလေက Multiplayer ပိုင်းဘာမှထပ်မတိုးပေးထားဘူးဆိုပေမယ့်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတဲ့ Add-on တွေကြောင့် ပိုပျော်စရာကောင်းလာခဲ့ပါပြီ။ ဂိမ်းလေးကို မြည်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link မှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Publisher : BonusXP
Release Date : 3rd Oct, 2017
Metacritic : 53 ၊ Google/iOS : 4.7
Stranger Things ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ဖူးကြပြီလား? အဲ့ထဲက နာမည်ကျော် Hawkins ဆိုတဲ့ မြို့ငယ်လေးထဲမှာ Retro Classic ပုံစံ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူတူကစားရမှာဖြစ်ပြီး Hawkins အပြင် Mirkwood Forest ၊ Upside Down စတဲ့နေရာတွေမှာ စူးစမ်းရမယ်။
အထူးဆန်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ တစ်ခါတရံ Speedrun ပုံစံမျိုးကစားရတတ်ပြီး Eggos ၊ Gnomes စတာတွေ စုဆောင်းရမယ်၊ Sci-fi Horror ဂိမ်းဆိုတော့ ချောက်ချားစရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းလေးကို ကစားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link မှာ Download ဆွဲရယူနိုင်ပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ Games တွေနဲ့ Upcoming Title တွေကို ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမယ်။